Ho hentitra ny minisiteran’ny Fanabeazana: “Hosazina ireo sekoly mbola minia misokatra” | NewsMada
Mazava ny fampitandremana nataon’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, tamin’ny alalan’ny Talen’ny sampandraharaha misahana ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara (Onep), Tsarasidy Marcellin, omaly. “Hosazina ireo sekoly mandika ny lalàna, mbola minia misokatra ihany”…
Niteraka resabe teo anivon’ny sekoly, indrindra ireo sekoly tsy miankina amin’ny fanjakana ny fepetra noraisin’ny fitondram-panjakana, tapa-bolana lasa izay, tamin’ny fanapahan-kevitra ny hanalavana ny fialan-tsasatry ny Paska ho 15 andro indray. Ny alahady teo, araka ireny efa niaraha-nandre ireny, noho ny fihanak’ity valanaretina Coronavirus ity haingana dia haingana, indrindra eto amin’ny faritra Analamanga, nohamafisin’ny fitondram-panjakana indray io fanapahan-kevitra io. Izany hoe, mbola mikatona mandritra ny 15 andro indray ny sekoly rehetra, na miankina na tsy miankina amin’ny fanjakana, ny oniversite rehetra.
Teo anivon’ireo sekoly tsy miankina no nandrenesana ny akon’izany, tao anatin’izay tapa-bolana izay. Nisy ireo avy hatrany dia nandray fanapahan-kevitra mialoha, tsy niandry ity didy navoakan’ny fanjakana ity. Teo kosa anefa ireo mbola nisalasala, niroaroa hevitra, naneho ny ahiahiny… “Dia ahoana izany ny hamelomanay tena, ahoana ny karaman’ny mpampianatra sy ireo mpandraharahan’ny sekoly, izay miankina amin’ny saram-pianaran’ny mpianatra…” Fa etsy andaniny, velona ahiahy tahaka izany koa ireo ray aman-drenin’ny mpianatra. “Izahay izany hotakin’ny sekoly saram-pianarana, kanefa ny sekoly ity hikatona ? “Dia ahoana tokoa moa izany ?”…
“Ady iombonana ity”…
Iza no homen-tsiny amin’izany ? Sarotra sy manahirana ny toe-java-misy. Na izany aza, tsy afaka ny hijanona fotsiny amin’izao fa tsy maintsy hatrehina ny zava-mitranga. “Ady iombonana”, araka ny voalaza ombieny ombieny no hatrehina, ary ho tombontsoan’ny rehetra no tanjona, indrindra ho an’ireo zaza sy ankizy madinika.
Omaly àry dia nanamafy nitondra fanazavana indray ny tompon’andraikitra eo anivon’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, tamin’ny alalan’ny Sampandraharaha miadidy ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara, Tsarasidy Marcellin. “Voakasika amin’iny fepetra nambaran’ny filoham-pirenena farany teo iny avokoa ny sekoly rehetra, na miankina amin’ny fanjakana na ireo miahy teny manerana ny Nosy”. Izany hoe, tsy misy avakavaka. Nambaran’ity tomponandraikitra ity àry fa “hisy ny fanaraha-maso atao, indrindra ho an’ireo sekoly mbola minia misokatra ihany”. Nampitandrina mihitsy aza izy ary nilaza fa “hisy ny sazy hentitra hampiharina ho an’izay mandika ny lalàna raha tratra”.
Na izany na tsy izany, araka ny efa nambara tamin’ny filankevitry ny minisitra, tapa-bolana lasa izay, ary mbola hampiharina mandritra izao tapa-bolana manaraka izao, misy ireo fepetra noraisina. Anisan’izany ny hoe “fampianarana ampitain-davitra”. Misy ny lesona halain’ny ray aman-dreny any an-dakilasy, ary ao anatin’ny fanajana tanteraka ireo fepetra ara-pahasalamana ao anatin’izao fahamehana ara-pahasalamana izao ny hanaovana izany. Asa anefa aloha, manao ahoana ny ho tena fampiharana izany ?